Burcad hubeysan oo lagu qabtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidanka ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay hawlgal ka sameeyeen qeybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ,waxaa ay gacanta kusoo dhigeen Koox burcad ah.
Halwgal si gaar ah looga sameeyay xaafado ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu soo qabtay koox burcad ah oo dhac u geysan jiray bulshadda degmada.
Gudoomiyaha degmada Wadajir Cabdiraxmaan Macalin Cali ayaa sheegay in Kooxdaan ay dhibaato ku haayeen dadka dhismayeyaasha ka wadda Xaafaddaha degmada, islamarkaana ay qaadi jireen lacago baad ah.
Waxaa uu sheegay in raggaan oo watay qoryaha AK 47 in ay lacago baad ah qaadi jireen Shacabka guryaha dhisanaya ee soo mara maamulka degmada Wadajir, islamarkaana maanta Ciidanka Booliska ay soo qabteen.
Ciidanka ammaanka ayaa maalmahan dambe kordhiyay hawlaha ay ku xaqiijinayaan ammaanka.